लकडाउनमा कलाकार नाजिरको यस्तो अभियान ! (भिडियोसहित) – Massive Khabar
Homeमनोरञ्जनलकडाउनमा कलाकार नाजिरको यस्तो अभियान ! (भिडियोसहित)
लकडाउनमा कलाकार नाजिरको यस्तो अभियान ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । हिजोआज नायक नाजिर हुसेन भोट माग्ने नेताहरुसँगै विभिन्न प्रश्न गर्दै हिड्न थालेका छन् । भोट हाल्नकै लागि विदेशको काम छोडेर नेपाल आएका हुसेन आफ्ना जनप्रतिनिधीहरुलाई भोट दिनुको कारण सोध्दै गाउँगाउँमा भोटको महत्व बुझाउँदै हिड्ने गर्छन ।
बाबुको अवरोधको वावजुत पनि भोटको महत्व बुझाउन दिनरात खटेका हुसेन एउटा भोटले पनि राष्ट्रपतिसम्म बनाउने र एक भोटको हारले मन्त्री पदसमेत खुस्किने बताउँदै बुझेर भोट दिन आग्रह गर्छन् ।
समाजमा भोट विक्री हुने गरेको र भोजभतेर र भाषणका भरमा भोट सर्वसाधारणले नबुझी दिने गरेको भन्दै यो प्रचलनलाई निर्मूल पार्न लागिपरेका हुन् ।
सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका हुुसेन काम गर्न विदेश पलयान भए तापनि भोट खासाल्न नेपाल आउँदा सबै प्रतिनिधिसँग भावी योजना खोज्दै हिड्छन् । रेडियोमा काम गर्ने आरजे मेनुकासँग मिलेर गाउँका महिला तथा बृद्दलाई पनि उनीहरुको भोट सही नेतृत्वलाई दिनुपर्ने भन्दै नेतासँग प्रश्न सोधेर परीक्षा लिन आग्रह गर्छन ।
निर्वाचनको जनचेतना फैलाउँदै हिडेका नाजिर र मेनुकाको प्रेमले पनि निर्वाचनको चेतना जस्तै झांगिने मौका पाउँछ ।अन्तत भावि योजना र दिर्घकालिन योजना भएका नेतृत्व चयनका लागि भोट सान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्छन् ।
यसरी भोेट खसाल्न आएका नाजिरले सक्षम नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधीमात्र भेटेन्न सक्षम जिवनसाथी पनि भेटेका छन् । उनिहरु छिटै विहे गर्ने तयारीमा छन् ।माथिको दृश्य चलचित्र एक भोटको सारांश हो । निर्वाचन आयोगको सहयोगमा निमार्ण गरिएको चलचित्र एक भोटमा भोटको महत्व दर्साइएको छ ।
५७ मिनेट २२ सेकेण्डको उक्त चलचित्रमा नाजिर हुसेन इन्द्रसिहं र मेनुका प्रधान मुनाको भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।
(श्रोत : हालखबर कुरा)
अभिनेता शिव श्रेष्ठका छोरा यस्तो हेन्डसम, जस्तो मान्छे उस्तै गज्जब मिठा कुरा ! (भिडियो सहित)
पुरानो भद्रगोल टिमले नयाँ सिरियल लिएर आउँदै !